नग्न युवतीको सफाई गरेर कमाउने छुटै तरिका Kasthamandap Daily
मेलबोर्न, भदौ ३१ गते । घरको सफाई गरे कति पैसा कमाउन सकिन्छ होला ? शायद ५ वा १५ हजार रुपैयाँ सम्म सोच्नुहुन्छ होला । तर घरको सफाई गरेर एउटी केटीले हरेक महिनाले झण्डै ५ लाख भन्दा धेरैं रुपैयाँ कमाउँछिन । आश्चर्य नमान्नुहोस, यो सत्य नैं हो । पैसा कमाउन उनि हप्तामा मात्रैं १६ घण्टा काम गर्छिन ।
हो यो सत्य हो । कसरी हरेक महिना धेरै रुपैया कमाउँछ ? वास्तवमा, यी केटीले हप्तामा मात्र १६ घण्टा काम गर्छिन र हरेक वर्ष झण्डैं ८६ लाख भन्दा धेरैं कमाउन सफल हुन्छिन । अष्ट्रेलियाको गोल्ड कोस्टकी २८ वर्षीय व्यवसायी स्नातक र एक बच्चाकी आमा हुन । उनले घर र पर्खालहरु सफा गर्छिन तर उनको शरिरमा कपडा भने हुँदैन । उनी नाङ्गै घर सफा गर्ने गर्छिन । उनि यो सबैं काम नाङ्गैं भएर गर्छिन । उनको अहिले सामाजिक सञ्जालमा एकदमैं धेरैं चर्चा हुने गरेको छ ।
सुरुमा पनि उनले सफा गर्ने काम गर्थिन तर सोचेजस्तो आम्दानी हुन नसकेपछि उनले अहिले यो तरिका अपनाएकी हुन । तपाईलाई जानकारी गराउँ उनी पहिले हरेक दिन झण्डैं आठ दश घण्टा काम गर्थिन तर अहिले मात्रैं एक हप्तामा १६ घण्टा काम गरेर पहिलेको भन्दा धेरैं गुणा पैसा कमाउन सफल भएकी छिन । महिला क्वींसल्याण्ड बेयर सबै सफा सेवा मार्फत काम गर्छिन ।
कम्पनीले यो काम गर्न व्यवसायको लागि राम्रो छ भन्यो तर कम्पनीको व्यापार योजना विवादमा पनि परेको थियो । स्थानीय सदस्यले यसलाई शंकास्पदको रूपमा लिएका छन । महिलाले, प्रतिक्रिया दिदै भनिन, “मलाई नग्न क्लीनर भन्छन् कि जब मेरो एक आकर्षक शरीर छ, त्यसो भए मैले यो किन गर्नु हुँदैन रु उनी भन्छिन मलाई नग्न भएर काम मन पर्छ र यसले मलाई पूर्णतया मजा दिन्छ ।”
यस शैलीको काममा, महिला भन्छिन् कि सबै ग्राहकहरूले यो काम गर्दा स्वागत गर्नुभएको छ। ग्राहकहरू बुकिंग गर्नु अघि कम्पनी द्वारा आवश्यक नियमहरूको बारेमा अघिसूचित गरिएको छ । यी अधिकांश मानिसहरू बस कुरा गर्न र शरीरको सुन्दरता हेर्न चाहन्छन् । महिलाले यस्तो व्यवसायलाई समाजमा चाँडै मान्यता प्राप्त गर्न अपेक्षा गर्छिन । महिला, जो कपडा बिना सफा गर्छिन, उनि भन्छिन् कि बेयर सबै कम्पनीसँग पहिलेको कामको तुलनामा, आय अब दोब्बर भन्दा धेरैं छ । पहिलेको काम गर्ने समय र अहिलेको कामको घण्टा घटाइएको छ। उनी भन्छिन् कि पहिलो हप्तामा ४० घण्टा भन्दा धेरैं काम गर्ने प्रति वर्ष झण्डैं ३० लाख आसपास आम्दानी हुन्थ्यो तर अहिले यो बढेको छ । एजेन्सी